Ny afak’omaly sy ny omaly - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
• Afak’omaly ianao milaza fa “tsy mafy noho ny pesita sy kolera fa miaina tsotra fotsiny dia milamina io”.
Omaly ianao miteny fa “mihiboha daholo, aza mivoaboaka mihitsy fa aretimandoza io, tsy isika irery fa izao tontolo izao tratra daholo”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “Tsy ilaina ny manao arontava amin ity aretina ity, fa ny marary sy ny dokotera ihany no mila manao azy fa olona te hizesta ny olona ivelan’ireo manao an’ireny”.
Omaly ianao miteny indray fa “vahoaka Maditra tsy manao kasy bosy ka mila ampanaovina TIG”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “vonona isika, efa ampy ny fitaovana fa tsy tafiditra eto io”.
Omaly ianao milaza fa “tsy fotoanan'ny fanomezan-tsiny izao”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “raha mbola fanampiana avy any ivelany no andrasantsika na amin’ny 2060 aza dia hahantra eto ihany isika”.
Omaly anefa ianao mikiaka rehareha fa “tsy mbola nisy fitondrana na iray aza nahazo volabe nindramina avy any ivelany raha tsy izao fitondrako izao”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “ny tambavy, evoka sns... dia tsy ilaina fa ho fanamboniana moral ihany izany ka aza mianika kinipotsy sy ravitsaran'olona anaty tamboho fa vaksiny ihany no ilaina fa virus izy ity fa tsy mikraoba akory”.
Omaly ianao miogaoga indray fa “tambavy CVO no fanafody mahasitrana azy ity.
• Afak’omaly ianao milaza fa “isika no hanavotra an izao tontolo izao, ny porofo fa mandaitra dia satria tsisy Maty na iray aza eto Dago”.
Omaly ianao “manabarabara vahoaka indray fa tsy nisotro azy nahafaty an’ireny”.
Afak’omaly ianao milaza fa “mafibe isika, hananantsika ny teknika, vohafehintsika ny aretina ka mitonia daholo”.
Omaly indray ianao no “miseho manontany fa iza eto antany no mahafehy azy ity?”
• Afak’omaly ianao milaza fa “azo sotroin’ny rehetra ny CVO, tsy misy effet secondaire, afaka misotro aby ankoatran’ny…!”
Omaly anefa “lazainao indray fa tsy mety amin ny bevohoka sy misy aretina mitaiza indray”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “Imbécile ianareo izay manakiana fa olom-bitsikely zay 6% fotsiny ka tsy mila ny hevitrareo fa zahay zao no mitondra ka ze tianay ihany io”.
Omaly ianao miantso indray fa “ndao hifanampy, azo atao ny maneho hevitra fa aza manopa olona fa gadrainay”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “raran'ny lalana ny manome anaram-panafody na doka fanafody satria mety poizina ho an’ny hafa”.
Omaly “tsy sasatra ny manao dokam-barotra ny CVO ianao fa hoe hany mahavonjy nolazaina fa fanafody”.
• Afak’omaly ianao milaza fa misy mirakla vita amin’ny zavamaniry tsisy afa-tsy eto Madagasikara ny fanafody hitantsika.
Omaly ravin-kazo avy any sina no hasandratrao.
• Afak’omaly ianao milaza fa “mila mamboly Artemizia daholo ny isan-tokatrano fa io no hanavotra antsika ary hahafirenena sangany antsika”.
Omaly anefa ianao “hanafatra vary stock tampon 16.000 taonina satria noana ny gasy”.
• Afak’omaly ianao milaza fa “tsisy vola isika fa nandoavana ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny beantitra ny vola tokony hividianana fitaovana ampy ho an’ny fahasalamam-bahoaka”.
Omaly ianao milaza fa “misy indray ny vola ary ampy” (manome tsiny an’ily iraika nangataka tsy niera taminareo).
• Afak’omaly ianao milaza “fihibohana tanteraka no atao”.
Omaly “confinement total satria henjana ilay izy avy eo confinement partiel no nolazaiko fa tsy totaly izany ka”.
"Na izao tontolo izao aza izay mijery antsika tsy ho omby raha hosoratana daholo ny fahatairana momba ny Afak’omaly sy omaly raha hosoratana avokoa, fa ireo no voasoratra dia mba ny hinoanareo ka ekena sa tsy ekena tompokolahy sy tompokovavy ?" CoviD 19: 13